Ogaden News Agency (ONA) – Dhiigyacab ina Iley oo ku baxay faracaaradood iyo Galaalshe oo mar kale cadawgii lagu riiqay
Dhiigyacab ina Iley oo ku baxay faracaaradood iyo Galaalshe oo mar kale cadawgii lagu riiqay
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaadhay Xarunta dhexe ayaa sheegaya in CWXO ay maalmahan sii kordhayeen dagaaladii joogtada ahaa ay ku naafeynayeen ciidamada cadawga.
Waxaa kaloo uu na soo gaadhsiiyay wariyayaha Wakaaladda ula socda CWXO in dhiigyacab ina Iley oo dhawaanahan si dhuumasho ah ku marayay dagmooyin ka mid Ogaadeenya markay ka war heleen Naftood-hurayaasha Ciidamada Waddaniga Xoraynta Ogaadeenya ay weerar ku qaadeen hadafkiisu ahaa inay gacanta ku dhigaan, hase yeeshee uu ku baxsaday fara caaradood. Wuxuu intaa ku daray in loo gaystay ciidamadii la socday khasaare gaadiid iyo mid nafeedba leh. Faafaahinta hawlgalkaa ayaa u dhacay sida;
30/9/2011 ayay CWXO dagaal qorshaysan ku qaadeen kolanyadii uu la socday dhiigyacab ina il dhurwaa meesha lagu magacaabo JUFFA oo u dhaw Dhagax madaw waxaana halkaa lagaga gubay halbaabuur iyo wixii saaraa waxaa kaloo dagaalkaas lagaga dilay 15 askari waxaana lagagaga dhaawacay20 kale. Dagaalkan oo sidaan soo sheegnay hadafkiisu ahaa in gacanta lagu dhigo dambiilahaa ayaa lagu sagootiayay ina ildhurwaa.
Waxaa sidoo kale weerar balaadhan lagu qaaday 2dii bishan10aad Feedha-cad oo u dhaw Galaalshe weerarkaas oo lagu qaaday ciidamo hawl gal u joogay halkaa. Dagaalkan oo khasaare laxaadleh lagu gaadhsiiyay cadawga ayaa waxaa lagaga dilay 23 askari meesha lagaga dhaawacay 25 kale. Dagaalkan waxaa ka qayb galay diyaaradaha qumaatiga u kaca kuwaas oo gurayay dhawaaca iyo bakhtiga cadawga islamarkaana isku dayay inay gacan siiyaan maxaysatada dagaalka ku jirta.
Dagaaladii ugu danbeeyay ee naga soo gaadhay xarunta dhexe ayaa waxay u kala dhaceen sidan;
15/9/2011 dagaal ka dhacay leedilay oo ka tirsan dagmada Dhagaxbuur waxa ciidamada cadawga lagaga dilay 3askari 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
26/9/2011 dagaal mir ah ka dhacay Goora shan oo u dhaw Boodhcaano oo ka tirsan degmada Goday waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 5askari waxaana lagaga dhaawacay 6 kale. Isla maalintaa waxaa falgaadmo ah ciidamada cadawga lagu fuliyyay Tantoomi oo ka tirsan degmada Dhagaxmadaw halkaasoo cadawga lagaga dilay 2 askar 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
29/9/2011 dagaal kamiin ah ka dhacay Karinka solo oo u dhaxeeya Qalaafo iyo Goday waxaa cadawga lagaga dilay 4 askari 8 kalena waa lagaga dhaawacay.
30/9/2011 dagaal isku dhac ah oo ka dhacay Tantoomi oo ka tirsan Dhagaxmadaw waxaa cadawga lagaga dilay 3 askari waxaana lagaga dhaawcay 5 kale. Dagaal kale oo ka dhacay Qabri cadaad oo ka tirsan Dhagaxmadaw waxaa cadawga lagaga dilay 2 askari 3 kalena waa lagaga dhaawacay
1/10/2011 dagaal ka dhacay Malablay oo ka tirsan dagmada Dhanaan waxaa cadawga lagaga dilay 2 askari waxaana lagaga dhaawacay 4 kale. Isla maalintaa ayuu dagaal ka dhacay Malablay oo ka tirsan Dhanaan, waxaana cadawga lagaga dilay 3 askari waxaana lagaga dhaawacay 7 kale.
2/10/2011 dagaal ka dhacay Labagudubka dhagaxmadaw waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 3 askari waxaana lagaga dhawaacay 5 kale. Sidoo kale dagaal ka dhacay Dhababka boholalay oo ka tirsan degmada dhagaxbuur waxaa cadawga lagaga dilay 2 askari waxaana lagaga dhaawcay 3 kale. Dagaal kale oo dhacay Dulgaaban oo ka tirsan degmada Garbo ayaa waxaa cadawga lagaga dilay 2, waxaana lagaga dhaawacay mid kale
4/10/2011 dagaal ka dhacay Garigo’an waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 3 askari waxaana lagaga dhaawacay 2 kale
Dhanka waxa wariyaha Xarunta dhexe u jooga ONA wuxuu intaa ku daray in ay jiraan dhibaatooyin loo gaystay dad shacab ah oo aan waxba galabsan oo si aargoosi ah loo waxyeeleeyay. Dhibaatooyinkan oo isugu jira dil iyo xadhig ma aha kuwii ugu horeeyay ee gaadha dadka masaakiinta ah.
Dhibaatooyinka loo gaystay dadka shacabka ah ee na soo gaadhay waxay ka kala dhaceen;
27/9/2011 Yoocaale oo ka tirsan degmada awaare waxaa lagu xidhay dadka kala ah
1. Sahra rashiid aw axmed
2. maxamed deeq xuseen daahir
3. sheikh nuur bashiir
1/10/2011 waxaa xadhig loogu gaysatay degmada Dhagaxbuur dadka kala ah
• Dahabo cabdi raage
• Ayaam cabdi raage
• Cabdi maxamed xaashi
4/10 /2011 waxaa tuulada Garigo’an dil loogu gaystay dadka kala ah
1- Cabdinuur cabdi raxmaan
2- In shariif sulub oo jirta 7 sano jir ah